Tattooga dhabarka buuxa, su'aalaha iyo jawaabaha | Tattoo
Tattoo gadaal buuxa, su'aalo iyo jawaabo
Ma aha Cherry | | Tattoos dhabarka
Waxyaabo yar ayaa ka cajaa'ib badan xaraashka dhabarka oo dhan. Awood u leh leexinta madaxyada meel kasta oo ay dhaafaan, waxay astaan ​​u noqon karaan qofka nasiibka u leh ee xiranaya.
Qodobkaan waxaan ku arki doonaa qaar ka mid ah shakiga ugu badan ee xaraashka dhabarka oo dhan waana isku dayi doonaa inaan ka jawaabno.
1 Mudo intee le'eg ayey qaadanaysaa in la helo tattoo dhabarka buuxa?
2 Waa maxay nidaamka lagu sawirayo dhabarka oo dhan?
3 Immisa ayey ku kacaysaa tattoo dhabarka buuxa?
Mudo intee le'eg ayey qaadanaysaa in la helo tattoo dhabarka buuxa?
Waqtiga ay qaadaneyso inaad ku daboosho dhabarkaaga oo dhan tattoo wuxuu kuxiran yahay qodobo ay ka mid yihiin miisaanka, xaddiga dhabarka ee aad u leedahay inaad sawirto (waxaa suuragal ah inaad horey u leedahay tattoo), iyo naqshada. Xitaa sidaas, qiyaas ahaan celcelis ahaan waxay sheegaysaa inay qaadato inta u dhaxaysa labaatan iyo afartan saacadood wadar ahaan.
Waa maxay nidaamka lagu sawirayo dhabarka oo dhan?
In kasta oo ay jiraan noocyo badan oo taatuuga ah oo lagu samayn karo duullimaadka, mid ka mid ah astaamaha lagu yaqaanno “tattoos” dhabarka oo dhan ayaa ah inay qaadato dhowr kulan.
Nidaamkan waxaa loo sameeyaa sababo badan, kuwaas oo dhammaantood aad muhiim u ah. Marka hore, in yar oo yar la sameeyo waa habka ugu fiican ee loogu ilaalin karo farshaxanka tatuuga sida ugu macquulsan. Maxaa intaa ka badan, maqaarku wuxuu u janjeeraa inuu casaanto oo bararo, sidaa darteed waxaa fiican in la xadido waqtiga farshaxanka tatuuga ah uu ku xakameeyo natiijada ugu dambeysa ee sawirka.
Ugu dambeyntii, sidoo kale Waa wax caadi ah in la sameeyo kal-fadhiyo kala duwan iyada oo ku xidhan taabashada qeexitaanka, midabaynta ama hooska.
Immisa ayey ku kacaysaa tattoo dhabarka buuxa?
Xaqiiqdii, ahaanshaha sida weyn ee tattoo, qiimaha ayaa cirka isku shareeraya, taas oo aan ikhtiyaar u ahayn qof walba. Qiimuhu wuxuu si fudud ku gaari karaa oo ka badnaan karaa saddex kun oo euro, iyadoo kuxiran dhibka naqshadeynta, farshaxanka ... Sikastaba xaalku ha ahaadee, waa inaad mudnaanta siisaa natiijada ugu dambeysa si natiijada ay gebi ahaanba u jeceshahay.
Tattoo dhabarka buuxa waa wax laga naxo, sax? Noo sheeg, ma leedahay tattoo sidan oo kale ah? Naqshadee ayaad jeclaan lahayd inaad xirato? Xusuusnow inaad noosheegi karto waxkasta oo aad rabto, kaliya waa inaad nooga tagtaa faallooyinka!
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Tattoos » Tattoos dhabarka » Tattoo gadaal buuxa, su'aalo iyo jawaabo
Tattooyaal waaweyn oo qurux badan oo indho qabad leh
Tattoo hiwaayadda, adduunka ugu qayli waxa aad hiwaayaddaadu tahay